Bannaanka beerashada xilliga qaboobaha | January 2020
Talooyin loogu talagalay beeritaanka baradho ka hor xilliga qaboobaha
Ugu Weyn Ee Bannaanka beerashada xilliga qaboobaha
Ma jeclaan lahayd baradho yaryar, laakiin dhaqaajiso? Ka dibna, geli jiilaalka. Waxaa jira, dabcan, halis gaar ah oo beerto ka hor dhaxan, laakiin beergooyska wuxuu ka weynaan doonaa caadiga ah, iyo, dabcan, waxay u bislaadaan hore. Cimilada iyo ciidda koonfureed waxay ka faa'iideysan doontaa ballanqaadkan, sidaa daraadeed Bishii Maajo waxaad ku dili kartaa dalagyo badan oo ah baradho iyo khudaar hore.
Tartuurka: Koritaanka iyo daryeelka ee berrinka bannaan
Noocyada daryeelka marigolds marka koray on balakoonka
Maxay faa'iido u tahay Yeruusaalem oo ku taal farshaxanka waxayna ku dhaawacmi kartaa jirka? Waxyaabaha kiimikada iyo sawirrada dhirta
Sidee bay halis u tahay qaniinyada qamaarka qofku?
Waa maxay noocyada berriga ee ugu weyn
Hibiscus Isbedelka - wakiil cajiib ah oo ka tirsan qoyska Malvova. Tan iyo qarnigii 19aad waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee gudaha. Qodobkani waxaan si faahfaahsan u tixgelineynaa qeexitaanka botanical, deegaan juquraafi, taariikhda asalka, muuqaalka geedka. Waxaan baraneynaa sida si habboon loo daryeelo Hibiscus Isbedelka, iyo sidoo kale sida loo koro ee guriga iyo nooca taranta ku haboon dhirta. Read More
Lunar taariikhda Lunar of dhirbaaxada ninkii beerta ka shaqaynayay April, 2018
Life hacking for gardarrada: sida loo keydiyo karootada Maqsin ee xilliga qaboobaha ee bacaha sonkorta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Bannaanka beerashada xilliga qaboobaha 2020